Kuthetha ukuthini ukuphupha abantu abadala? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ukuphupha abantu abadala, oko kuthetha ntoni? Kuqhelekile kuthi ukubhenela kubantu abadala kuba ziyafana nobulumko. Abadala, ekubeni baphila ixesha elide, banamava ekuncedeni abatsha ngokunika iingcebiso ezinamandla.
Ukhe waphupha abantu abadala kwaye ungazi ukuba kunokuthetha ntoni oko? Njengalo naliphi na iphupha, kubalulekile ukuphonononga imiboniso, unikele ingqalelo kwizinto kunye nendlela ekubonakala ngayo inani labantu abadala.
Ngaphandle kokuqhubela phambili, jonga eli nqaku kancinci malunga nokuba kuthetha ntoni ukuphupha umntu okhulileyo.
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha abantu abadala
2 Iphupha lomntu omdala
3 Iphupha lomfazi omdala
4 Iphupha lomntu omdala owonwabileyo
5 Ukuphupha uhamba nenkampani yabantu abadala
6 Ukuphupha abantu abadala abafayo
7 Ukuphupha umntu omdala
Kuthetha ukuthini ukuphupha abantu abadala
Ukuphupha kwabantu abadala kuthetha ukungena kwinqanaba elitsha lobomi. Eli liphupha elibaluleke kakhulu kwaye umphuphi kufuneka anike ingqalelo ekuchongeni ezinye izinto ezikhoyo ephupheni.
Kungenzeka ukuba indoda endala ekuthethwa ngayo lilungu losapho, utatomkhulu oswelekileyo kwaye oku ngokuqinisekileyo kunomnye ummeli walowo uphuphayo.
Ukulangazelela okanye inkxalabo kumntu ohambileyo. Kuqhelekile ukuba xa siphulukene nomntu, siphupha ngeemeko ezithile umntu lowo ayinxalenye yazo.
Ukuphupha kwabantu abadala luphawu lolwazi, kusenokwenzeka ukuba umntu ophuphayo uguquka kwaye akhule ngengqondo. Ufumana ubulumko kunye nokukhula ukujongana neengxaki zobomi.
Kwabo bathanda ukungcakaza nokubheja ngokusekelwe emaphupheni, yazi ukuba ukuphupha umntu omdala kungazisa ithamsanqa ngamanani 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 kunye ne-25.
Kwimeko yomdlalo we-bug, ingcebiso kukubheja kwengonyama. Zama nokubhala phantsi amaphupha akho, njengoko kuyinto eqhelekileyo ukulibala uninzi lwawo xa sivuka kusasa.
Ke, ngakumbi kwabo bakholelwa kwimiyalezo yamaphupha ukuba bayidlale, ukubhala kwenza wonke umahluko.
Iphupha lomntu omdala
Eli phupha luphawu lokuba unokuzama ukuvavanya isakhono sakho. Isenokuba kwimeko yomsebenzi wakho okanye kwimisebenzi ebalulekileyo ekufuneka uyenzile.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukubonisa imbeko kunye nokongama kwethu oku akusoloko kusenzeka ngezenzo. Ukuziphatha kwethu, nokuba sithi cwaka, kuyakwazi ukubonisa ukuba singobani kwaye sinakho na. Musa ukuthabatheka, umzekelo, kukucaphuka. Yiba nobulumko!
Iphupha lomfazi omdala
Ukubona ixhegokazi ephupheni luphawu lwethamsanqa kunye novuyo. Ukuba ubudiniwe kukujongana nobunzima, ungafumana amava okuzola kunye nolonwabo. Yenza konke okusemandleni akho.
Iphupha lomntu omdala owonwabileyo
Eli phupha limele ukuba izicwangciso ozenzileyo zinokuzaliseka ekugqibeleni. Oko akuthethi ukuba kuya kufuneka uzinze kuloo nto, kude nayo. Zama ukuqonda amathuba, zama ukwenza ngobulumko, kwaye uthathe okona kulungileyo ebomini.
Ukuphupha umntu omdala owonwabileyo yinto entle, kwaye kuya kufuneka uyonwabele loo mzuzu woxolo olukhulu.
Ukuphupha uhamba nenkampani yabantu abadala
Eli phupha libonisa ukuba umntu ophuphayo ufuna iingcebiso ukusombulula izinto ezibalulekileyo. Ukuba utatomkhulu nomakhulu wakho basaphila, ungathini ngokubatyelela kwaye ubachaze kwiingxaki zabo? Ayinakuhlala iyingxaki enkulu, ewe, kodwa xa kukho umzuzu wokuthandabuza, ukukwazi ukuthembela kubulumko babadala kuhlala kuyinto elungileyo.
Ke, wonwabele loo mzuzu! Ukuba awunabo oomakhulu nootatomkhulu abaphilayo, kuthekani ngokuthetha nabamelwane abadala ukuze ufumane ukuba zeziphi iingcebiso abanokukunika ukukhanyisa umbono wakho.
Ukuphupha abantu abadala abafayo
Xa ephupheni ubona umntu owalupheleyo esifa okanye egula, luphawu lokuba uphelisa ubomi ukuze uqalise elinye ibakala elingcono.
Ukuba nangaliphi na ixesha ixesha lakho libi kakhulu, thatha ithuba lokuqalisa le nzame intsha ngendlela eyahlukileyo. Zama ukwamkela iingcinga ezintle, unike amandla ikhaya lakho, kwaye uzithintele ubuhlobo obubi. Lonke ukhuseleko ekuphuculeni eli nqanaba litsha liqalileyo iya kuba sisicelo esikhulu.
Ukuphupha umntu omdala
Njengoko besesitshilo ngaphambili, iphupha ngalinye malunga nabantu abadala linokuba neesimboli ezahlukeneyo. Ke ngoko, kubalulekile ukuba unake ezinye izinto eziyinxalenye yephupha. Uziva njani, ibiyintoni imeko, ukuba umncinci okanye uvele njengomntu okhulileyo.
Ukuphupha umntu omaziyo omdala kusenokwenzeka ukuba kunento yokwenza noloyiko okanye ixhala onokuba nalo malunga nokwaluphala. Uloyiko lokuguga yinto echaphazela abantu abaninzi. Abanye bayithatha kancinci, eyinyani ngokupheleleyo, kodwa abanye abayamkeli kwaye bacinge ngayo ngalo lonke ixesha.
Kakhulu kangangokuba inani lotyando lweplastiki lonyuka ngakumbi nangakumbi, konke ngenxa yenkxalabo malunga nokuguga. Ke, ukuba uyasokola ngolu hlobo lwexhala, eli phupha linokuchaphazeleka luloyiko lwakho kunye nokukhathazeka malunga nokwaluphala.
Ungalibali ukushiya iikhomenti apha ngokungathi liphupha lokuguga!